‘हाइकमान्ड’ बैठकमा झलनाथको आक्रोश ‘ममाथि अन्याय भयो,यहि वरीयताक्रम मलाई मान्य छैन,पुनर्विचार गरेर सच्याइनुपर्छ’ - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
‘हाइकमान्ड’ बैठकमा झलनाथको आक्रोश ‘ममाथि अन्याय भयो,यहि वरीयताक्रम मलाई मान्य छैन,पुनर्विचार गरेर सच्याइनुपर्छ’
काठमाडौं । नेकपाको ‘हाइकमान्ड’ बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफूमाथि वरीयताक्रममा अन्याय भएको भन्दै सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘मैले ममाथि वरीयताक्रममा भएको अन्यायबारे खुलेर कुरा राखेको छु,’ खनालले भने, ‘अहिलेको वरीयताक्रम मान्य छैन, त्यसैले पुनर्विचार गरेर सच्याइनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराएको छु ।’
खनालको ध्यानाकर्षणपछि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले अर्को बैठकमा त्यसबारे छलफल हुने बताएका थिए । एकीकृत पार्टीको अध्यक्षद्वयपछि दोस्रो वरीयतामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई राखेकोमा खनालको असन्तुष्टि छ ।
४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्यको नाम टुंगो
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्यको नाम टुंगो लगाएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय (हाइकमान्ड)को बैठकले सबै केन्द्रीय सदस्यको नाम टुंगो लगाएको हो ।
केन्द्रीय कमिटी सदस्यको पूर्णसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेपछि मंगलबार सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । केन्द्रीय कमिटीमा तत्कालीन एमालेबाट २४१ तथा माओवादी केन्द्रबाट २०० सदस्य छन् । पूर्वएमालेबाट १९६ जना साबिक केन्द्रीय कमिटी तथा ४५ नयाँ अनुहार समेटिएका छन् भने माओवादीबाट ८६ जना केन्द्रीय सचिवालय र बाँकी साबिकको २९९ सय सदस्यीय पोलिटब्युरो तथा पार्टी प्रवेश गरेकाहरूबाट समेटिएका छन् ।
एकीकरणका लागि तीन कार्यदल, १५ दिनको समयसीमा
नेकपाले तीन महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीमातहतका सबै कमिटी र जनसंगठनहरूको एकीकरण सम्पन्न गर्न तीनवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ । पार्टी विधानलाई थप स्पष्ट पार्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय नियमावली मस्यौदा कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा पूर्वएमालेबाट महासचिव पौडेल र बेदुराम भुसाल तथा पूर्वमाओवादीबाट देव गुरुङ र खिमलाल देवकोटा छन् ।
त्यस्तै, सातवटै प्रदेश संगठन कमिटी र तलका कमिटी एकीकरणका लागि सुझाब दिन ७ सदस्यीय प्रदेश एकीरणसम्बन्धी कार्यदल बनेको छ । कार्यदलमा सम्बन्धित प्रदेशका संयोजक र सहसंयोजकहरू सदस्यका रूपमा रहने बताइएको छ ।
जनसंगठनहरूको एकीकरणका लागि तत्कालीन दुवै पार्टीका मोर्चा फाँट संयोजक र सहसंयोजक रहेका ४ सदस्यीय कार्यदल बनेको छ । कार्यदलमा सम्बन्धित जनसंगठनका दुई प्रमुख सदस्य रहनेछन् । तीनवटै कार्यदललाई छलफल गरेर १५ दिनभित्र एकीकरणसम्बन्धी मस्यौदासहितको सुझाब पेस गर्ने गरी समयसीमा तोकिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
दुई अध्यक्षले केन्द्रीय कार्यालय तोक्ने
सचिवालय बैठकले नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयबारे निर्णय गर्ने जिम्मा अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डलाई दिएको छ । आपसी परामर्शका आधारमा दुई अध्यक्षले तत्कालीन एमालेको धुम्बाराही र तत्कालीन माओवादीको कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामध्ये एकलाई केन्द्रीय कार्यालय तोक्नेछन् ।
अर्को बैठकबाट स्थायी समिति
नेकपाले अर्को बैठकबाट स्थायी समिति सदस्यको नाम टुंगो लगाउने जनाएको छ । दुवैतर्फबाट समेट्ने ४५ जनाकै सूची तयार भइसके पनि अर्को बैठकबाट मात्र स्थायी समिति गठन गर्ने समझदारी सोमबारको बैठकमा भएको हो ।
चार नेतालाई स्थायी समितिमा लैजाने तयारी
नेकपाको स्थायी समितिमा पूर्वएमालेबाट चार नेताको बढुवा गर्ने अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच समझदारी भएको छ । तत्कालीन पार्टीमा पोलिटब्युरो सदस्य रहेका बेदुराम भुसाल, रघुजी पन्त र विष्णु रिमाल साथै केन्द्रीय सदस्य एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठलाई स्थायी समिति सदस्यमा मनोनीत गर्ने समझदारी भएको हो ।
४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा पूर्वएमालेका तर्फबाट २६ जनामध्ये अमृतकुमार बोहरा, केशव बडाल, सोमनाथ प्यासी आमन्त्रित सदस्यका रूपमा रहने भएपछि रिक्त पदमा उनीहरूलाई मनोनीत गर्न लागिएको केन्द्रीय सचिवालयका एक सदस्यले बताए । अर्का आमन्त्रित सदस्य डा. पुष्प कँडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएकाले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
६ केन्द्रीय सदस्य हेरफेर
पूर्वएमालेका तर्फबाट मनोनीत केन्द्रीय सदस्यको नाममा नेता भीमबहादुर रावलले असन्तुष्टि जनाएपछि उनकै सिफारिसअनुसार ७ नम्बर प्रदेशबाट ३ केन्द्रीय सदस्य हेरफेर गरिएको छ । अन्य ३ जनासहित सोमबार बसेको नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले ६ जनाको नाम हेरफेर गरेको हो ।
यसअघि सार्वजनिक गरिएका पुण्य गौतम, साध्यबहादुर भण्डारी र दयालबहादुर शाही हटाएर राजेन्द्रसिंह रावल, लालबहादुर विक र दीपक देवकोटालाई मनोनीत गरिएको छ । त्यस्तै, स्थायी समितिका आमन्त्रित सदस्यको रिक्त स्थानमा केन्द्रीय कमिटीमा सोभियत ढकाल, उमा कोइराला र नारायण सिलवाललाई मनोनीत गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
राजपामा असन्तुष्टि चुलियो, शीर्ष नेताले नै गरे बैठक बहिष्कार
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को बैठक अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिल झाले बहिष्कार गरेका छन् । पार्टी […]
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी रोक्का राखिदिएको व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट […]
संसद बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप-प्रत्यारोप
काठमाडौं । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बुधबारबाट शुरु भएको छ । पहिलो बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने […]
आलोचना मत्थर पार्ने प्रयास ? प्रचण्ड मध्यमार्गी भूमिकामा
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जारी स्थायी समिति बैठक सरकारको विरोध र समर्थनमा केन्द्रीत […]
स्थायी कमिटीमा प्रचण्डको पौने दुई घण्टा लामो जवाफ, प्रधानमन्त्री बाेलेनन्
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबैका मुद्धा सम्वोधन […]